Holiday Ecommerce: Iselfowuni, iThebhulethi kunye neDesktop | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-6 kaDisemba ngo-2011 NgeCawa, uDisemba 4, 2011 UAdam Omncinci
Oku kujongeka kunomdla kwinkcitho kunye nokuguqulwa kweli xesha leeholide ukusuka kubantu Monate. Ukucinga nje ukuba kusinika ubungqina obucacileyo bonyuko lokusetyenziswa kweFowuni kunye neThebhulethi yokuthenga ukusuka kuLwesihlanu oMnyama kunye neCyber ​​Monday, inika ukuqonda okungakumbi kwiindlela ezahlukeneyo zokuziphatha kwabantu abasebenzisa iitafile, iselfowuni kunye needesika. Ngokoluvo lwam, kubonakala ngathi abantu abanamacwecwe sele bekhululekile ukuthenga kubo kodwa abasebenzisi beselfowuni banokuba madolw 'anzima ngakumbi. Mhlawumbi kungenxa yokuba injongo yabo kukwenza uphando kwaye bangathengi
tags: Yongeza-kwitroli amaxabisoULWESIHLANU omnyamakwi-cyber mondayi-desktop yokongeza-kwinqwelo yamaxabisoAmaxabiso e-desktop bounceamazinga okuguqulwa kwedesktopeCommerceamaxabiso esongezo-kwinqwelo-mafuthaamaxabiso okubhabha okuhambayoamaqondo okuguqula iselfowuniiethebhulethi zokongeza inqweloiithebhulethi zokuhlawula amaxabisoAmanqanaba okuguqula iipilisi
Isikhokelo se-SEO Automation
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2011 ngo-10: 37 AM
“Yongeza kwinqwelo” amanani aquka kuphela izinto ezithengwe kwi-intanethi. Ndiyakrokrela ukuba abasebenzisi beselula banokuthenga rhoqo, kodwa bathanda ukuthenga evenkileni. Umzekelo, ndihlala ndisebenzisa iselula ukujonga iidilesi zevenkile/amaxesha okuvula. Ngaba kukho nabuphi na ubungqina obongezelelweyo bokuthi iindwendwe kwizixhobo zethebhulethi zingaphaya kwendlela yokuguqula?
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2011 ngo-10: 46 AM
Inqaku elihle, iMarketingXD, kunye nenye ebekufanele ukuba siyichukumisile. Khange ndicinge ukuba abasebenzisi bemfonomfono abaxabisekanga kangako… baxabisekile kangako, ukuba abakho ngaphezulu! Kwaye ukuthandwa kwabo kuyakhula!